UKUBUYEKEZWA KWE-EXPRESSVPN - KUNGANI I-EXPRESSVPN ISEYI-BEST VPN KU-2021? - AMANANI
Ukubuyekezwa kwe-ExpressVPN - Kungani i-ExpressVPN iseyi-Best VPN ku-2021?
Awusoze wazi lapho othile ecishe abheke phezu kwehlombe lakho noma elunguza kukhompyutha yakho. Ikhompyutha yakho ihlala ithambekele ezinsongweni ezisengozini uma ungaxhumi kunethiwekhi ehlakaniphile. Yini inethiwekhi ehlakaniphile? Inethiwekhi ehlakaniphile ivikelekile njalo ngokubethela okufanelekile futhi ivumela kuphela ukuxhumana okuphephile nokwangempela ukuxhuma kunethiwekhi yakho. Ngakho-ke kufanele ngaso sonke isikhathi sixhume i-VPN (i-Virtual Private Network) ukuze sivikele ukuphequlula kwakho iwebhu kubakhwabanisi, ama-ejensi ezinhlamvu ezintathu, nawo wonke umuntu ongakulimaza.
Okuqukethwe umbukiso 1 Yini i-VPN? ezimbili Isebenza kanjani i-VPN 3 Izizathu ezi-5 zokuthi kungani kufanele usebenzise isevisi ye-VPN 4 Izithombe ezinhle kakhulu ze-ExpressVPN: 5 Izici ze-ExpressVPN 5.1 Inqubomgomo yokuNgena ngokuqinile 5.2 Enye yezinto ezisheshayo ku-SpeedTest.net 5.3 Inombolo enhle yamaseva 5.4 Izipesheli Kill Shintsha 5.5 Isebenza kumadivayisi amaningi 5.6 Ezinye Izici Ezivelele 6 Izinzuzo nezindleko zokusebenzisa i-ExpressVPN 7 Isinqumo Sokugcina 8 Isivivinyo Samahhala se-ExpressVPN
I-ExpressVPN ingenye yezinsizakalo ezihamba phambili ze-VPN esizibuyekezile ngokusatshalaliswa okubanzi kwamaseva nezici ezingavamile njenge-split-tunneling engatholakali kwamanye ama-VPN. I-ExpressVPN ingaphezulu kakhulu kohlangothi olubizayo kepha ikuvikela kakhulu wena nenethiwekhi namadivayisi axhunyiwe. Okubhaliselwe okuyisisekelo kunikela ngokuxhumeka okuthathu kwelayisense ngalinye kepha kunganwetshwa njengoba okubhaliselwe kuya phezulu.
Yebo, kumele uzibuze, Iyini i-VPN futhi kungani ungayidinga? I-VPN, noma i-Virtual Private Network, ikuvumela ukuthi wakhe ukuxhumana okuphephile nenye inethiwekhi nge-Intanethi. Ama-VPNs angasetshenziselwa ukuthola ukufinyelela kumawebhusayithi noma kokuqukethwe okunqunyelwe isifunda, ukuvikela umsebenzi wakho wokuphequlula kusuka emehlweni adlayo ku-Wi-Fi yomphakathi, nokuningi. Lapha i-athikili ezinikele ichaza ngokuningiliziwe, Kuyini i-VPN, nokuthi isebenza kanjani?
Isebenza kanjani i-VPN
Ngokwemigomo eyisisekelo, ukuthululwa kwe-VPN kwakha ukuxhumana kwephoyinti nephuzu okuvimba abasebenzisi abangagunyaziwe ukuxhuma nokufinyelela inethiwekhi yakho. Idivayisi yephoyinti lokugcina idinga ukusebenzisa iklayenti le-VPN ukudala umhubhe we-VPN. I-VPN uhlelo lokusebenza lwesoftware elisebenza endaweni noma ngaphezulu kwefu. Iklayenti le-VPN ligijima ngemuva futhi alibonakali kumsebenzisi wokugcina ngaphandle uma kunezinkinga ezihlobene nokusebenza.
ukwephulwa kwe-dpc watchdog win 10
Ukusebenza kwe-VPN kungavinjelwa ngamathonya ahlukahlukene, phakathi kwawo ijubane lokuxhumeka kwabasebenzisi be-inthanethi, uhlobo lokubethela okusetshenziswa yi-VPN kanye nenqubo esetshenziswa ngumhlinzeki wesevisi ye-intanethi. Enkampanini, ukusebenza kungaphazanyiswa nayizinga eliphansi lensizakalo (i-QoS) elingaphandle kolawulo lomnyango wezobuchwepheshe bolwazi (i-IT) wenhlangano.
Izizathu ezi-5 zokuthi kungani kufanele usebenzise isevisi ye-VPN
Nazi ezinye zezizathu ezibaluleke kakhulu zokuthi kungani kufanele usebenzise i-VPN empilweni yakho yansuku zonke:
Izithombe ezinhle kakhulu ze-ExpressVPN:
I-P2P ivunyelwe: Yebo
Inani Lamaseva: 3,000+
Inani Lendawo Elikhona: 94
Indawo Yebhizinisi: I-British Virgin Islands
Ukuqinisekiswa Kwedatha: I-AES-256-SHA256 / AES-256-GCM
Ukubethela Kwemininingwane: SHA-256
Ukuxhawulana: 2048-bit RSA
Iphrothokholi ye-VPN: VulaVPN
Izindleko: 12.95 ngenyanga, futhi kubiza u- $ 99.95 izinyanga eziyi-12 ngesiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-30. Kepha sinesaphulelo esikhethekile sakho,
I-ExpressVPN 49% Isaphulelo + izinyanga ezingu-3 mahhala
Namanje awuqiniseki? Ungahlala uzama isiqinisekiso sokubuyiselwa imali esingenabungozi se-Expressvpn sezinsuku ezingama-30, ukubona ukuthi yi-VPN ekufanele yini.
I-ExpressVPN yisisombululo esiphelele se-network yangasese (VPN) esiphelele esihlinzeka insizakalo ye-VPN esheshayo enezici zobumfihlo ezithuthukisiwe kanye nokuvikelwa kwe-malware ukukugcina uvikelekile futhi uvikelekile kwi-inthanethi. Uma ufuna ukutshala imali ku-VPN ngokusakaza, ukusakaza, noma ukuphequlula nje, i-ExpressVPN iyisinqumo esihle kakhulu esisebenza kumadivayisi amaningi, ngezinhlelo zokusebenza ze-Windows, Mac, iOS, Android, Linux ne-Routers, futhi sisekela ukuxhumana ngasikhathi sinye kumadivayisi afinyelela kwangu-5 ukuze uhlale uvikelekile. Ngejubane eliphakeme kakhulu kanye nomkhawulokudonsa ongenamkhawulo nethrafikhi, ungapheqa ngokukhululeka usebenzisa i-ExpressVPN.
i-proxy server emisiwe ayiphenduli windows 7
Inqubomgomo yokuNgena ngokuqinile
I-ExpressVPN ayivumeli futhi ayisoze yafaka noma yiliphi ikheli le-IP, umlando wokuphequlula, indawo okuhanjwa kuyo iTraffic noma idatha ye-multimedia noma imibuzo ye-DNS. Iningi labahlinzeki be-VPN lichaza kuzibuyekezo zabo ukuthi abagcini amafayela we-log, kodwa sibonile ezinye izinsizakalo ze-VPN ezinenqubomgomo yokugawula engabazekayo.
Enye yezinto ezisheshayo ku-SpeedTest.net
Sivivinye amandla we-ExpressVPN futhi sathola ukuthi le-VPN isebenza kahle kakhulu futhi ishesha kakhulu ku-SpeedTest.net. Iningi labo likwazile ukusinika isivinini esihle sokulanda kepha ukukhathazeka kunesivinini sokulayisha.
ukuthuthukiswa kwewindi 10 kubhajwe kuma-99
Inombolo enhle yamaseva
I-ExpressVPN isakazeke ngaphezu kwamaseva ayi-3000 + asebenza emazweni angama-94 kuwo wonke amadolobha ahlukene angama-160 + futhi asabalala njalo ngezikhathi ezithile. I-ExpressVPN incintisana neNordVPN, PIA, neTorGuard ngokuya ngevolumu yamaseva abawanikezayo.
Izipesheli Kill Shintsha
Uma usebenzisa insizakalo eqondene nendawo yemisebenzi efana nokugembula, i-ExpressVPN iphinde inikeze i-'Kill Switch 'ephathekayo esenzelwe ukubulala ngokuzenzakalela noma iyiphi isoftware noma amawebhusayithi obewasebenzisa uma kwenzeka ukuthi ukuxhumana kwakho kwenethiwekhi kulahlekile.
Isebenza kumadivayisi amaningi
Izinsizakalo ze-ExpressVPN zisebenza kuzingxenyekazi zamadivayisi amaningi njengeWindows, Mac, Android, Linux (i-UI ehamba phambili embonini), i-iPhone ne-iPad, ama-routers ahlukile, iziphequluli zewebhu ezahlukahlukene, i-SmartTV, njll.
Ezinye Izici Ezivelele
Itholakala ku-Safe Jurisdiction - iBritish Virgin Islands, Enye yezindawo eziphephe kakhulu.
Ukubethela Okuqinile (AES-256) + Vula i-VPN - Ukuphepha Kwebanga Lempi
I-ExpressVPN inikeza ngezinsizakalo zeTorrenting and File Sharing
Vulela iNetflix nezici zayo kufaka phakathi iNetflix USA - iNetflix isebenze kahle ngokudlula amabhulokhi eNetflix-Geo e-United States (amaseva ama-2), eCanada, e-United Kingdom (amaseva ama-2) naseNetherlands.
Iyahambisana ne-TOR Browser futhi.
Izinzuzo nezindleko zokusebenzisa i-ExpressVPN
i-itunes ayikwazi ukuxhumeka kuphutha elingaziwa le-iphone
Izinqubomgomo zobumfihlo eziqinile kakhulu.
Ivumela ukulandwa kwe-P2P ne-BitTorrent.
Amaseva amakhulu, asatshalaliswa kabanzi.
Isekela izivumelwano ezivulekile ze-VPN kuwo wonke amapulatifomu.
Isivinini esivumelanayo ngokusebenza okuthuthuke kakhulu.
Ivula kalula amasayithi okusakaza avela kuwo wonke umhlaba, kufaka phakathi i-US Netflix.
I-interface elula nohlelo lokusebenza olusebenziseka kalula ngohlelo lokusebenza lwedeskithophu.
Isebenza eChina nase-UAE enezingodo zeZero ngenethiwekhi.
Uhlelo lokuphepha oluthuthukisiwe kuzinhlelo zokusebenza zombili namaseva.
Ingxoxo ebukhoma engu-24/7 ngokuxhaswa okubanzi kwedivayisi.
Kancane ohlangothini olubizayo kunezimbangi.
Zimbalwa izixhumanisi ezivunyelwa ngasikhathi sinye.
Ithimba lokusekela le-ExpressVPN alaziwa kakhulu.
Izinkinga zokudonsa ezaziwayo zokuxhumeka ngezikhathi ezithile.
Amaseva okusakaza alebulwa ngokufanele.
I-ExpressVPN iyinsizakalo ebanzi ye-VPN enenethiwekhi ephawulekayo nezici ezinhle kakhulu. Kepha, uma kuqhathaniswa nombango, inikeza ukuxhumana okumbalwa ngasikhathi sinye, futhi kuyabiza kakhulu.
Ijubane Elivivinyiwe 106 Mbps
Ukusekelwa Kwevidiyo I-4K UHD
Ukusakaza 10 NGO-10
Eminye Imisebenzi Yokusakaza I-Amazon Prime, i-HBO, i-BBC iPlayer, iHulu
Izindawo Amazwe we-94, amaseva we-3000 +
Ukuphepha 10 NGO-10
Uhlobo Lokubethela Ama-256-bit AES w / Imfihlo Ephelele Yokudlulisela Phambili
Isikhukhula I-P2P & Ukuthuthumela Kuvunyelwe
Bulala Shintsha Yebo
Inqubomgomo Yokungena Azikho izingodo zokukhomba
Izivumelwano Vula i-VPN, i-L2TP, i-PPTP
Inani Lemali 7 KU-10
Izindleko zenyanga eziphansi kakhulu Okukhethekile kwabafundi bethu, I-ExpressVPN 49% Discount + 3 months Free
Isiqinisekiso sokubuyiselwa imali Izinsuku ezingama-30
Isivivinyo Samahhala se-ExpressVPN
I-ExpressVPN inikeza a ukwaneliseka okugcwele, isiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-30 - futhi yilokho ozokusebenzisa ukuze uzuze. Kwenyanga eyodwa, uzokwazi ukujabulela i-ExpressVPN ngaphandle kwemingcele futhi akukho zibopho. Uma usuqedile, uqinisekisiwe ukubuyiselwa imali okugcwele.
Qala isilingo sakho samahhala manje
Kuxazululwe: Isithonjana se-Wi-Fi Silahlekile Kusilayidi Yesistimu Windows 10 I-Laptop
Lungisa isango elizenzakalelayo alitholakali (ukuxhumana kwe-WiFi noma i-Ethernet) Windows 10
Amakhodi amakhuphoni amahle kakhulu we-VPN nezaphulelo ze-2021!
ungayikhubaza kanjani i-trackpad lapho igundane lixhunyiwe
kusho ukuthini iphrinta esimweni sephutha
ungasibeka kanjani isithonjana se-wifi kubha yomsebenzi
uyini umyalo wokusebenzisa isihloli sefayela lohlelo ukubuyisela amafayela wesistimu abucayi?
amawindi ayi-10 anqamula izintambo kaningi
i-chrome isebenzisa i-100% cpu